MPT Myanmar | Moving Myanmar ForwardMPT Club FAQs MM - MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward
1. MPT Club အစီအစဉ် ဆိုတာ ဘာပါလဲ။ MPT Club အစီအစဉ်မှာ ဘာ့ကြောင့် ပါဝင်သင့်ပါသလဲ။
MPT Club သည် MPT သုံးစွဲသူတိုင်း ဆုလက်ဆောင်များရရှိနိုင်မည့် အစီအစဉ်ဖြစ်ပါသည်။ MPT Club အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ထားသော MPTဖုန်းနံပါတ်သည် ဖုန်း အသုံးပြု မှု ပေါ်တွင်အခြေခံပြီး ၊ MPT၏ မိတ်ဖက်(partner) ဆိုင်များတွင် ဈေးဝယ်တိုင်း MPT Point များကို ထပ်ဆောင်းလက်ဆောင်အဖြစ် ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ ရရှိထားသော MPT Pointများဖြင့် အထူးစီစဉ်ထားသော MPT ဝန်ဆောင်မှုများ၊ MPT မိတ်ဖက်(partner) ဆိုင်များမှ ဈေးဝယ်ကူပွန်များကို လဲလှယ်ရယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
2. MPT Club အစီအစဉ်မှာ ဘယ်လို ပါဝင်ရမှာပါလဲ။
(က)USSD ကို အသုံးပြုခြင်းနည်းလမ်း – *345# ကို ရိုက်နှိပ်ခေါ်ဆိုခြင်းဖြင့် MPT Club အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်နိုင်ပါသည်။
(ခ)SMS ကို အသုံးပြုခြင်းနည်းလမ်း – 345သို့ REG M/F ဟု စာတို(SMS)ပေးပို့ခြင်းဖြင့် MPT Club အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်နိုင်ပါသည်။
3. MPT ကနေ ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ MPT Point တွေ ရရှိနိုင်မှာပါလဲ။
(၁) ယနေ့အသုံးပြုလိုက်သော ဖုန်းငွေပမာဏအပေါ်မူတည် ၍ member level အလိုက်နောက်တနေ့ တွင်Point များကို ရရှိသွားမည်။ အသုံးပြု လိုက်သော ဖုန်းငွေပမာဏ သို့ Usage ဆိုသည်မှာ ဖုန်းဘေလက်ကျန်ငွေမှ အသုံး ပြု လိုက် သော လုပ်ဆောင်မှူ ကိုဆိုလိုပါသည်။ Pay as you go, Package, ချေးငွေ ရယူမှု နှင့် service subscription fees (SDP, IDD, roaming and VAS service)အားလုံးကိုဆိုလိုပါသည်။
(၁) BTL package ဝယ်ယူ မှုများ မပါဝင်ပါ။
(၂) B2B package ဝယ်ယူ မှုများ မပါဝင်ပါ။
(၃) Data Package gifting တွင် လက်ခံ ရရှိသူ မှ သာ ပွိုင့်ရမည်။
(၄) Balance transfer – (ဝန်ဆောင် ခ+ TAX) ဥပမာ 26 kyats (သို့) Loan ချေးငွေ – (ဝန်ဆောင် ခ+ TAX)ဥပမာ 60 kyats အပေါ် ပွိုင့် ရမည်။
(၅) Loan ကို စတင်အသုံးပြုသည့်အချိန်မှစ၍ ပွိုင့် လက်ခံရမည်။ Loanမှ ချေးငွေ ပြန်ဆပ်သည့် အချိန်တွင် လည်းဝန်ဆောင်ခ +tax များအပေါ် ပွိုင့် ရမည်။
(၆) Balance transfer လွဲပေးသူမှ ဝန်ဆောင်ခ +tax များအပေါ် ပွိုင့် ရမည်။ ငွေလက်ခံရရှိသူသည် service များကိုအသုံးပြုသည်မှစ၍ ပွိုင့် လက်ခံရမည်။
(၂) MPT ၏ မိတ်ဖက် ဆိုင်များတွင် ဈေးဝယ် တိုင်း MPT Point များကိုလက်ဆောင်ရရှိမှာပါ။
4. MPT၏ မိတ်ဖက်(partner) ဆိုင်တွေ ကနေ ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ MPT Point တွေ ရရှိနိုင်မှာပါလဲ။
ငွေပေးချေပြီးပါက အလိုအလျောက်စနစ်ဖြင့် MPT Point ပေးအပ်ခြင်း။ စစ်ဆေးကြည့်လိုပါက 345 သို့ BAL ဟု စာတိုပေးပို့ပါ။
5. Diamond, Platinum, Member ဆိုတာ ဘာလဲ။ Membership level များကို မည်သို့ ပိုင်းခြား ထားသနည်း။
Diamond, Platinum, Member ဆိုတာ အဖွဲ့ဝင်များ မိမိရောက်ရှိနေသော အခြေအနေများကို ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်သည်။မိမိရောက်ရှိနေသော အခြေအနေ အလိုက် အခွင့် အရေးများကိုခံစားနိုင်သည်။ Membership level ပိုင်းခြားမှုများကို အောက်ဖော်ပြပါ ဇယား အတိုင်း သိရှိနိုင် ပါသည်။ Membership level ပိုင်းခြားမှုများကို အသုံးပြု သူ၏ ၃လ ပျမ်းမျှ အသုံးစရိတ် ကို အခြေခံ ၍ level များကို သတ်မှတ် ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
6. အဖွဲ့ဝင်၏ သက်တမ်းကာလမှာ မည်မျှနည်း။
အဖွဲ့ဝင်၏ သက်တမ်းကာလမှာ ၃လဖြစ်ပါတယ်။ အဖွဲ့ဝင် များ၏ Membership Level ပြောင်းလဲ မှုရှိ ပါက သုံးသပ် ချက်များကို လတစ်လ ၏ ၁ ရက်နေ့ တွင် အသိပေးစာတို ရရှိမည် ဖြစ်သည်။
7. point များကိုမည်သည့်အချိန်အတိုင်းအတာဖြင့်တွက်ချက်သနည်း။
8.MPT Club ထိပေါက် ကစားနည်းကို မည်ကဲ့ သို့ ကစားနိုင်မည်နည်း။
MPT Club ထိပေါက် ကစားနည်းကို MPT Club member ဖြစ်ရုံ ဖြင့် နေ့စဉ် member level အလိုက် Free ကစား ခွင့် ရှိမည် ဖြစ်သည်။
Diamond – ၃ ကြိမ်
Platinum – ၂ ကြိမ်
Member – ၁ ကြိမ်
9. MPT Club member များအတွက် ထိပေါက် game ရဲ့ပေါက်မဲများမှာ မည်သည့်ပေါက်မဲများဖြစ်သနည်း။
100 Points တို့ ဖြစ်သည်
10. MPT Point အရေအတွက် ဘယ်လောက်နဲ့ MPTရဲ့ ဘယ်လိုဝန်ဆောင်မှုတွေကို လဲလှယ်ရယူနိုင်မှာပါလဲ။
လူကြီးမင်းရရှိထားသော MPT Point များကိုသုံးပြီး အောက်ဖော်ပြပါများမှ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ MPT ဝန်ဆောင်မှုများကို လဲလှယ်ရယူနိုင်ပါသည်။ ဥပမာ – ၁၉၉ MPT Pointဖြင့် MPT ဖုန်းများသို့ မိနစ် ၆၀ ဖုန်းခေါ်ဆိုခွင့် (သို့) 300 MB အင်တာနက်အသုံးပြုခွင့် (သို့) MPT ဖုန်းများသို့ SMS အစောင် ၃,၀၀၀ ပေးပို့ခွင့် (သို့) ဖုန်းBill ၁၆၀ ကျပ် တို့အနက်မှ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုကို လဲလှယ်ရယူနိုင်ပါသည်။ ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုစီ၏ သက်တမ်းမှာ လဲလှယ်ရယူပြီးချိန်မှစ၍ ရက်၃၀အထိဖြစ်သည်။
လိုအပ်သော MPT Point အရေအတွက် Option-1 Option-2 Option-3 Option-4 ၀န်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုနိုင်သော သက်တမ်း
Voice Data SMS Cashback
၅၀ ၁၀ မိနစ် 40MB အစောင် ၂၀၀ ၄၀ ကျပ် ရက် ၃၀
၉၉ ၂၀ မိနစ် 100 MB အစောင် ၁,၀၀၀ ၈၀ ကျပ် ရက် ၃၀
၁၉၉ ၆၀ မိနစ် 300MB အစောင် ၃,၀၀၀ ၁၆၀ ကျပ် ရက် ၃၀
၂၉၉ ၁၀၀ မိနစ် 500MB အစောင် ၅,၀၀၀ ၂၆၀ ကျပ် ရက် ၃၀
၃၉၉ ၁၆၀ မိနစ် 800MB အစောင် ၈,၀၀၀ ၃၅၀ ကျပ် ရက် ၃၀
၇၉၉ ၄၀၀ မိနစ် 2,000MB အစောင် ၂၀,၀၀၀ ၇၂၀ ကျပ် ရက် ၃၀
မှတ်ချက် – Voice သည် MPT အချင်းချင်းဖုန်းခေါ်ဆိုရန် ဖြစ်သည်။ SMS သည် MPT အချင်းချင်း စာတိုပေးပို့ရန် ဖြစ်သည်။ Cash back သည် MPT အချင်းချင်းဖုန်းခေါ်ဆိုရန်နှင့် စာတိုပေးပို့ရန်၊ အင်တာနက်အသုံးပြုရန် တို့အတွက်ဖြစ်သည်။ ဖော်ပြပါနှုန်းထားများတွင် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ပါဝင်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ Service package အလိုက် ခံစားခွင့်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဇယား အတိုင်း ဖြစ်သည်။
IDD subscription fee ကို member level အားလုံး 499 points ရှိရုံဖြင့် လဲလှယ်နိုင်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။
Roaming subscription fee ကို member level အားလုံး 900 points ရှိရုံဖြင့် လဲလှယ်နိုင်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။ (Roaming ကျသင့်ငွေ ၉၀၀ ကျပ် subscription fee တခုထဲသာ Point ဖြင့် အကျုံးဝင် လဲလှယ်နိုင်ပါသည်)
11. HMPT Point ကိုသုံးပြီး MPT ဝန်ဆောင်မှု package ဖြစ်တဲ့ Voice (သို့) Balance Package ကို လဲလှယ်ရယူထားပါတယ်။ MPT မဟုတ်တဲ့ တခြား operator နံပါတ်ကို ဖုန်းခေါ်ဆိုတဲ့ ဘယ်လိုဖြစ်မှာပါလဲ။
အမျိုးအစား On-net (including MPT mobiles, MPT fixed lines) Off-net (including Ooredoo/Telenor/MEC)
12. Roaming ကို ဘယ်လိုရယူနိူင်သလဲ။
Roaming subscription fee ကို member level အားလုံး Points 900 Point ရှိရုံ ဖြင့် လဲလှယ် နိုင်ပြီ ဖြစ်ပါသည် (Roaming ကျသင့်ငွေ ၉၀၀ ကျပ် subscription fee တခု ထဲ သာ Point ဖြင့်အကျုံးဝင် လဲလှယ်နိုင် ပါသည်)